असफल नेतृत्व भन्दै ओलीमाथि झलनाथको आक्रोस्, तत्काल राजिनामा नदिए पार्टी फुटाएर अघि बढ्ने चेतावनी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल नेतृत्वको आरोप लगाएका छन् ।उनले पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेका दावी गरे । पार्टीको सचिवालय बनाउँदा आफुलाई ओलीले अन्याय गरेको भन्दै आफ्नो बरियता मिचेको खनालको आरोप थियो ।
खनालले पार्टी नेतृत्वले पार्टीको नीति र विधिको उलंघ्घन गरेको समेत आरोप लगाए । ‘नीति र विधि पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरो भनेको शीर बिन्दुबाटै हुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘टुप्पीबाट हो, टुप्पी भनेको अध्यक्ष । यो पनि दुईटा अध्यक्षले गर्नुपर्ने हो । उनीहरुले यो कुरालाई पहलकदमी लिनु पर्ने हो । सुरु गर्नुपर्ने हो ।’
त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति जनता आकुलव्याकुल बनेका समेत खनालले बताए । सात महिनामा जनताले सोचे अनुसारको काम सरकारले गर्न नसकेको र सरकार उल्टो बाटोमा लागेको भन्दै खनालले सरकारको चर्को आलोचना गरे ।
अहिले नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार गठन भएको ७ महिना पूरा भइसक्दा पनि यो अवधिमा सरकारले के गर्यो? के गर्न पर्थ्यो ? र किन नागरिकमाझ विश्वासको आधार खडा गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नहरु उब्जन थालेको नेता खनालले बताए ।
त्यस्तै उनले नेकपाका सबै नेताहरु आ–आफ्नै गुट, उपगुट बनाउनमा लागि परेको भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा सबै भन्दा ठुलो गुट आफैंले बनाउने दावी समेत गरे ।यद्यपि अहिले नै पार्टीमा गुट सञ्चालनको पक्षमा आफु नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
Posted on October 3, 2018 Author Categories Big News, फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीति
Previous Previous post: ओलीलाई राजीनामा गराउन ६२ सांसदको गोप्य भेला, सामूहिक राजीनमा दिने सहमति
Next Next post: ‘आठ पास गरेका केपी ओली एकाएक डबल पीएचडी !’